Nepal Samaya | नविन अभिलाषी
एक गुल्जार सहरमा जंगबहादुरको आत्मा
उखनउका विभिन्न सहरबाट जंगबहादुर प्रभावित थिए। अलिगन्ज, हुसैनगन्ज, रकाबगन्ज, निसादगन्ज, ख्यालीगन्ज, हजरतगन्ज जस्ता सहरहरु अत्याधिक मन परेपछि नेपालमा पनि त्यही गन्जहरुको मोडलमा नयाँ सहर बनाउने जंगबहादुरले रहर गरे।
नेपालगञ्जबाट रोल्पा पुर्‍याएर कसरी बदलियो सुन्दर हरिजनको परिचय?
सामान्य चोरी मुद्दामा जेल परेका सुन्दर हरिजनले विजयविक्रम शाहको नामबाट रोल्पा कारागारमा किन र कसरी सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सहज छैन। कैदी साटफेरको रहस्यमय तर रोचक यो घटनाले प्रहरी प्रशासन, कारागारदेखि सरकारी वकिल र अदालतजस्ता निकायमा हुने गरेका कुरुप चित्रहरु उदाङ्गो बनाएको छ।
झण्डा एकताको प्रतीक भनेर पढ्ने जमाना रहेन। जसको हातमा झण्डा छ त्योसँग सामाजिक सत्ता मात्र छैन, अर्को झण्डा बोक्ने समूह वा व्यक्तिलाई बाइपास गर्ने मनोविज्ञान पनि छ।
नरेन्द्रजंग पिटरको कालो डायरी र कफीको कम्युनिष्ट स्वाद
पिटर यतिबेला वैचारिक मृत्युको कुरा गरिरहेका छन्। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि उत्पन्न राजनीतिक भुलभुलैयाले पिटरलाई जंग छुट्छ।
तत्कालीन माओवादी युद्ध–आन्दोलनको उभारबाट उदाएका केही जनप्रतिनिधिले सोचेजस्तो विकास गर्न सकेनन्। परिवर्तन ल्याउन सकेनन्। परिवर्तन गाउँपालिकाको उपप्रमुख भएर काम गर्दाको अनुभव त्यही छ हितकुमारी बुढा मगरको।लाई जुन सिद्धान्त र कार्यक्रम लिएर स्थानीय सत्तामा पुगेकि थिइन्। पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदासम्म त्यो कतै नमिलेको महसुस भयो।
शनिबार, वैशाख १०, २०७९